🥇 ▷ Facebook wuxuu diyaariyaa mawduucyada: Meesha la wadaago, xaaladda batteriga, iyo sheekada ✅
Facebook wuxuu diyaariyaa mawduucyada: Meesha la wadaago, xaaladda batteriga, iyo sheekada
Facebook wuxuu ku leeyahay barnaamij sheekeysi cusub oo aqoon isweydaarsiga ah. Waxay leedahay magaca loo yaqaan ‘strings’ waxayna u muuqataa inay la wareegtay astaamo badan adeegyo kale oo aad loo jecel yahay, kaas oo ah Snapchat.
Waxay noqon doontaa codsi la shaqeeya Instagram. Waxay ujeedadeedu tahay inay kuxirnaato isticmaaleyaasha ‘saaxiibada ugu dhow’ iyadoo loo oggolaanayo inay is dhexgalaan si ay ula wadaagaan faahfaahinta kala duwan ee muhiimka ah sida goobta, xawaaraha, ama heerka baytariga hadda jira. Intaa waxaa dheer, si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale heli doonaan howlo aasaasi ah, sida sheekada lafteeda.
Xargaha waxaa loo fahmi karaa inay yihiin bedelka adeegga Tooska Instagramin Rafanka weli hoos u dhacay Meey dhexdeeda. Tani waa iskuday ku biir sida ugu wanaagsan, waxa Instagram iyo Snapchat ay ku bixiyaan hal qeyb.
Waa barnaamij loogu talagalay qof walba
Soo koobid, waxaad saaxiibbada kula wadaagi kartaa macluumaadka ku saabsan meesha aad hadda ku sugan tahay ama xaaladda baterigaaga adigoo adeegsanaya barnaamijka cusub. Laakiin waxay heli doonaan adeegsiga iyada xitaa adeegsadayaasha baahida badan, maadaama loo isticmaali karo adeegga wada hadalka caadiga ah.
Way iska cadahay hadii Facebook uusan dooneynin in loo yaqaan ‘threads’ inuu noqdo mid ka sareeya, sidaa darteedna ay tahay inay dadka siiso waxbadan. Tani waa suurtogalnimada sababta u kicinta arsenaldeeda isku darka astaamaha guuleysta iyo kuwa la xaqiijiyay adeegyada la yaqaan.
Taariikhda sii daynta wali lama oga.